musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Kusiya Green Green Uchiri pazororo muSychelles
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kutarisirwa • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Ichizivikanwa nerunako rwembiri, Seychelles yakazviitira zita senzvimbo inochengetedza inogara pamwe neinosvika 47% yenyika yayo yakachengetedzwa uye inozivikanwa nekuyedza kwayo kukuru kuchengetedza kwayo yakasarudzika nhaka yakasarudzika kuburikidza nemaitiro akasimba uye matanho.
Seychelles mubairo unohwina mubairo munzvimbo inogara Indian Ocean.
Zvitsuwa zveSeychelles zvazove nzvimbo yekutanga yekugadzira nharaunda yayo yepamhepo pane Global Impact Network chikuva.
Iyi ipuratifomu yedhijitari iyo inobvumidza vashandisi kuteedzera chiyero uye kuratidzira zviito zvakagadzikana kuburikidza nezvinonakidza uye zvinokwanisika zvinetswa nezvenyaya dzepasirese.
Seychelles iri makumi matatu nemasere paEnharaunda Performance Index mu38, kutanga mudunhu reSub-Saharan uye sedunhu diki rechitsuwa; kuchengetedza zvisikwa inzira yehupenyu muSychelles.
Uchifunga kuti nepo kufamba kune zvakawanda zvakanaka, zvinogona zvakare, kutora zvinorema nharaunda nekuisa yakawedzera kuomesa pane isina kusimba zvisikwa uye nekupa mukukwira kwemafuta emafuta. Secheres, senzvimbo yekuhwina mubairo inogara iri mudunhu reIndian Ocean, inobata mafambiro anechokuita sechimwe chikamu chakakosha cheiyo bhizimusi modhi.
Hezvino zvinhu zvishanu izvo vashanyi vanogona kuita kuti vabatsire kuve chikamu chechengetedzo yekushanya yekufamba uchiri pazororo rako muSeychelles:
Ziva kuziva kwairi kuenda usati wafamba
Kuti uve neruzivo rwakazara rwekuenda, ziva nekusiyana kweSeychelles usati wasvika. Verenga pamusoro pezvitsuwa zvakasiyana siyana zvakatsaurirwa kuchengetedza uye maruva akasiyana siyana nemhuka dzeSychelles kuti uzive kwekuenda kusimudzira ruzivo rwako.
Tsigira eco-inovheneka nzvimbo dzekugara uye nevamwe vane basa rekufambisa vanopa pavanenge vari muSeychelles. Vazhinji vanoziva vevashanyi vanobatirana vanoita zvine mutsindo kuburikidza nemaitiro madiki kune nharaunda nekushandisa simba rinogona kumutsiridzwa, kuve nehunyanzvi hwekushandisa marara system, kumisikidza, kana kutombovaka vachishandisa zvinowedzerwazve zvinhu.
Paunenge uri muSychelles, unogona kudzikisa kabhoni tsoka yako nekuhaya bhasikoro kutenderera zviwi zvidiki sePraslin neLa Digue.
Paunenge uchishanyira zviwi zvakanaka, chenjera kuti usakanganisa zvisikwa zvisina kusimba. Zvakakosha kuti usabvisa chero zvigadzirwa zvemhuka, matombo, zvirimwa, mbeu kana matendere eshiri uye kudzivirira kubata kana kumira pamatombo emakorari. Usambofa wabvisa mhenyu mhenyu kubva mugungwa, uye rega kutenga zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kukamba yeganda kana zvimwe zvipenyu zviri munjodzi, uyezve hazvisi pamutemo kuzviita.
Kune mikana inoshamisa yekuchengetedza inowanika kuti vashanyi vatore chikamu muSeychelles kubva kumahombekombe nguva dzose kuchenesa-up kutora chikamu muzvirongwa zvekudzorera makorari vasingakanganwe zvimwe zviitiko zvekuchengetedza zvegungwa, vashanyi vanogona kubatsira nekubatana nenharaunda dzemunharaunda.
Paradhiso iri panjodzi nekuzadza pasi kana pagungwa; rangarira kugara uchienda nemarara ako. Marara akadai semapurasitiki anokuvadza kuhupenyu hwemugungwa sehove nehukutu, zvichizopedzisira zvave muketani yezvokudya.
Mvura ipfuma inokosha pazvitsuwa zvidiki; uchiri pazvitsuwa ndapota chengetedza mvura. Unogona kubatsira kuita chinhu nekutora mapfupi mashawa uye nekushandisa zvekare matauro ekugezera pane kuvagezesa zuva nezuva.